Ma dhabba in wafdiga Soomaalida ee ay isaga baxeen khudbadii madaxweynaha Iiraan – SBC
Ma dhabba in wafdiga Soomaalida ee ay isaga baxeen khudbadii madaxweynaha Iiraan
Ra’isalwasaaraha dawlada KMG Soomaaliya Cabdiwali Maxamed Cali (Gaas) ayaa ka hadley warar mudooyinkan la isla dhexmareyo oo ku aadan in isaga iyo wafdigii Soomaaliya uga qayb galayey shirka guud ee qaramada Midoobay ee todobaadkii hore ka dhacay magaalada New York ee dalka Mareykanka.
Warbaahinta Mareykanka & qaar ka mid kuwa Soomaalida ayaa maalmihii la soo dhaafay baahiyey in wafdigii Soomaalida ee uu hogaaminayey Ra’isalwasaare Gaas ay shirka uga baxeen markii uu khudbada bilaabay Madaxweynaha wadanka Iiraan Maxamuud AxmedNjad iyadoo khudbadaasi markii uu kaga hadlayey weeraradii lagu qaaday Mareykanka 11 September 2001-dii iyo xasuuqa ay sheegato Yuhuudo in lagu sameeyey dagaalkii labaad ee aduunka ay shirka isaga baxeen wadamo fara badan ergooyinkii ka socdey oo uu horkacayey Mareykanka.
Cabdiwali Maxamed Cali oo wareysi siiyey Idaacada codka Mareykanka ee VOA-da laanta Soomaaliga ayuu wuxuu ku beeniyey in ay ka baxeen khudbadii Madaxweynaha Iiraan, waxaana uu sheegay in isagu uu fadhiyey dhamaan intii ay socdeen khudbadaha oo uu sida uu sheegay ku qado seegay, waxaase uu sheegay in isaga iyo wasiirka arimaha dibada inta badan ay kala qaateen fadhiga shirka oo isagu marna fadhiyey, marna wasiirka marna safiirka balse wuxuu sheegay in marnaba aanu baneyn kursiga.
Warbaahinta Mareykanka ayaa ku darey Soomaaliya liiska wadamada ka baxay khudbadii madaxweynaha Iiraan, waxaase uu sheegay Ra’isalwasaaruhu in ay arintaasi ay tahay mid aanay waxba ka jirin, oo ay arintaasi u soo bandhigeen madaxda dalka Iiraan, iyo safaaradooda.
Cabdiwali Gaas waxaa kale oo farta ku fiiqay in xiriir aad u wanaagsan uu ka dhaxeeyo Iiraan & Soomaaliya isagoo sheegay deeq lacageed oo gaaraysa 25 milyan oo doolar ay ugu deeqeen Soomaaliya, wasiirka arimaha dibadana uu booqasho ku yimid magaalada Muqdisho.
Hadaba si aad u dhageysto hadalka Ra’isalwasaaraha & wareysi arinkaasi lagala yeeshay Link Audio-ga hoose riix.